ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ အာရှရေးရာအထူး ကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiang အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ အာရှရေးရာအထူး ကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiang အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ၌ တပ်မတော်၏ ဒုတိယအကြိမ် တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကျန်ရှိသည့် EAO များနှင့် လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ၊ အာရှရေးရာအထူး ကိုယျစားလှယျ H.E.Mr. Sun Guoxiang အား လကျခံတှဆေုံ့
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျ H.E.Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) နှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲ၌ တပျမတျော၏ ဒုတိယအကွိမျ တဈဖကျသတျ အပဈအခတျရပျစဲရေး ကာလအတှငျး ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးဆောငျရှကျမှု အခွအေနမြေားနှငျ့ NCA လကျမှတျရေးထိုးရနျ ကနျြရှိသညျ့ EAO မြားနှငျ့ လကျမှတျ ရေးထိုးနိုငျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအပျေါ အပွနျအလှနျဆှေးနှေး ခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိ ပါသညျ။